ကျောက်ဆည်မြို့ကျက်သရေဆောင်ရွှေသာလျောင်းတောင်( ၂ ) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Photography » ကျောက်ဆည်မြို့ကျက်သရေဆောင်ရွှေသာလျောင်းတောင်( ၂ )	10
ကျောက်ဆည်မြို့ကျက်သရေဆောင်ရွှေသာလျောင်းတောင်( ၂ )
Posted by thihayarzar on Jul 22, 2012 in Photography | 10 comments
ဓာက်ပေါင်းစုစေတီရွှေသာလျောင်းတောင် တောင်တက်ကားလမ်း အ၀င်မုဒ်ဦးအ၀င်မုဒ်ဦးနားမှ ဖူးမြင်ရသော လွမ်းစေတီပေါင်းကူးတံတားလေးကျောက်သဘောင်္ ဓမ္မာရုံဗုဒ္ဓသာသနာသပ္ပါယတြိရတနာကျောင်းတိုက်ကျောက်သဘောင်္ဓမ္မာရုံ ၊ ဓမ္မ၀ိဟာရကျောင်းဆောင် နှင့် ဓာက်ပေါင်းစုစေတီ မြင်ကွင်းဥာဏ်တော်အမြင့်ပေ ၄၅ ရှိသောမဟာမြတ်လေးဆူ မြတ်စွာဘုရားကျောက်သေတ္တာစေတီတော်ကျောက်သေတ္တာစေတီပြည်လုံးချမ်းသာ ရွှေတိဂုံစေတီ
thiha yarzar has written 75 post in this blog.
View all posts by thihayarzar →	Blog
ဖိုးထောင် says: စုံလင်စွာဖေါ်ပြပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် အားရပါးရဖူးသွားပါတယ်ခင်ဗျာ
ဘဲဥ says: မန်းဂေဇက်ရဲ့ အစွမ်းနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးက ဘုရားအစုံ ဖူးကြမယ်ဟေ့
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4605
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဟုတ်တယ် ..
တစ်နေရာတည်းမှာပဲ ဘုရားတွေ စုံအောင် ဖူးရမယ် ..
အဲ့ဒါ မန်းဂေဇက်တဲ့ကွယ် ..
သန်းထွဋ်ဦး says: အဲဒီ ကျောက်သင်္ဘောတောင်အောက်က ဖောင်ရွာ မှာတစ်လတိတိနေဖူးပါ၏။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9970
မောင်ပေ says: သာဓု သာဓု သာဓုပါ
TTNU says: ရောက်ဖူးပေမဲ့
thihayarzar says: ကိုသန်းထွဋ်ဦးလေ ဖောင်ရွာမှာ တစ်လလောက်နေဖူးတယ် ဆိုတော့ဖောင်ရွာရပ်ကွက်ရဲ့ ဓလေ့အကျင့်စရိုက်တွေကော သိသွားလား… ပြောပြပါဦး စိတ်ဝင်စားလို့ ……. ဘယ်တုန်းက ရောက်တာလဲ …… ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲဗျာ ……… တစ်မျိုးမထင်နဲ့ဗျာ …… ကျွန်တော်က ဖောင်ရွာ ရွာသစ်သားဗျာ ……
Ma Ei says: ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ကားပေါ်ကနေသာ
ငယ်စဉ်က အဖွားပြောပြတဲ့ အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်ထဲမှာပါတဲ့
ဘုဂလန့်် says: ယခုဒီပိုစ့်မှာ အောက်ကကွန်မန့်တွေကို ဘယ်သူက ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အနီတွေဝေဝေစာစာပေးထားတာလဲ၊ အပေါ်ကလူတွေရေးထားတာ ဘာမှားနေလို့လဲ။
ဘယ်သေချင်းဇိုးက လက်ကမြင်းထားတာလဲ ၊ လက်အားနေရင် ကိုင်စရာပေးထားမယ်၊
ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ကိုတော့ အားနာပါတယ်ဗျာ… ရိုင်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်
အနီတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်
thihayarzar says: ကိုဘုဂလန့်ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ……….မအိရေ ကျောက်သေတ္တာပုံကို နောက်နေ့အားရင် သေချာ ရိုက်ပြီး ပို့လိုက်ပါ့မယ်ဗျာ …. ကျွန်တော်ရိုက်တုန်းက မနက်ခင်းဖြစ်နေတော့ နေက ကင်မရာကို ထောက်နေတော့ ပုံက သိပ်မပေါ်လွင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ ……….. နောက်ထပ် ပုံတွေကိုလည်း အားပေးဦးနော်